बाथ रोग के हो र यसको उपचार कसरी गर्ने ? – KhabarTime
प्रा. डा. बुद्धि पौड्याल । रोग कडा भएको खण्डमा मन्द ज्वरो आउने, शरीरमा रगतको कमी हुने, हातगोडामा गिर्खाहरू देखा पर्ने, आँखा रातो हुने र दुख्ने तथा मुटु र फोक्सोलगायत शरीरका अन्य अंगहरूमा सुजन भई ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ। यो रोगमा शरीरको रोगविरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिमा ह्रास आउने भएकाले निमोनिया, छाला तथा मूत्रमार्ग जस्ता अंगको इन्फेक्सन बढी र जटिलरूपमा देखिने सम्भावना हुन्छ।
सासारभरिकै मानिसमा स्वास्थ्य समस्या एकपछि अर्को थपिँदै गएको पाइन्छ। पछिल्लो समय नसर्ने रोगको वृद्धिसँगै बाथ रोग पनि एक जटिसमस्याका रूपमा देखापरेको छ। यसमा पनि Rheumatoid आरथ्राइटिस भनेर चिनिँदै आएको बाथरोगको समस्याले अहिले धेरै मानिस पीडित छन्। यस रोगबारे मानिसमा जानकारीको अभावले पनि रोगीहरू उपचारका लागि अलमलिरहेका देखिन्छन्। तसर्थ उपचार गर्नुभन्दा अघि यस रोगका बारेमा जान्नु जरुरी छ।
Rheumatoid आरथ्राइटिस कस्तो रोग हो ?
Rheumatoid आरथ्राइटिस वयश्क तथा बढ्दो उमेरमा देखिने एक दीर्घ बाथरोग हो। बाथरोग (आरथ्राइटिस) भन्नाले शरीरका जोर्नी र यससँग सम्बन्धित अन्य अंग (हाड, मांसपेशी र यिनीहरूलाई एक–आपसमा जोडेर सम्बन्ध स्थापित गर्ने नशाहरू) दुख्ने, सुन्निने र जोर्नी अररो भई राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था बुझिन्छ। सम्पूर्ण जनसंख्याको करिब १ प्रतिशतमा देखिने यो रोग नेपालमा करिब २ लाख ५० हजार जति व्यक्तिलाई भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
Rheumatoid आरथ्राइटिसमा जोर्नीलाई घेरेर राख्ने भित्री झिल्लीमा सुजन हुन्छ। यसले गर्दा केही महिनाभित्रै जोर्नी वरपरको कुरकुरे हाड नष्ट हुन गई जोर्नीको संरचना बिग्रन जान्छ।
Rheumatoid आरथ्राइटिस नेपाली समाजमा जिउ र जोर्नी दुख्ने समस्याको एक प्रमुख कारण हो। रोगको शुरू अवस्थामा हातगोडाका जोर्नीहरू (विशेष गरी औंलाहरू, नाडी, कुहिना, कुम, घुँडा र गोलीगाँठा) दुख्ने सुन्निने र अररो हुन्छन्। बिहानपख र दिन ढल्दै गएपछि हातगोडा कक्रक्क हुनाले चियाको गिलास समाउन, टाँक लगाउन, धारा खोल्न, ढोकाको चुकुखोल्न तथा राति सिरक तान्नसमेत अप्ठेरो हुने गर्दछ।
समयमै सही उपचार नभएमा -युमटोइड आरथ्राइटिस बढ्दै गई हातगोडाका जोर्नीहरू बिग्रने, बांगिएर कुरूप हुने तथा जाम हुने सम्भावना हुन्छ। कसै–कसैमा भने रोग लामो समयसम्म हराएर पुनः बल्झिन सक्छ, दुःखाइ पनि केही समयको अन्तरालमा घट्ने–बढ्ने भइरहन सक्छ।
मटोइर्ड फ्याक्टर के हो ?
Rheumatoid फ्याक्टर सामान्यतया Rheumatoid आरथ्राइटिसका बिरामीको रगतमा पाइने आफ्नै शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिबिरुद्ध उत्पन्न भएको एक किसिमको प्रोटिन हो। यो रोगबाट ग्रसितमध्ये करिब दुई तिहाइ बिरामीको रगतमा देखिने यस्तो प्रोटिन कहिलेकाहीं स्वस्थ मानिस, तथा बाथबाहेकका अन्य रोगीहरूमा पनि देखिन सक्छ। त्यसैले Rheumatoid फ्याक्टर पोजिटिभ देखिएमा नहुने भन्ने हुँदैन। रोगको निदानमा सहयोगी मात्र हुने यो जाँच पटक–पटक गरिरहनु जरुरी पनि हुँदैन।
मधुमेह उच्च रक्तचाप तथा मुटुको रोग जस्तै Rheumatoid आरथ्राइटिस पनि पूर्णरूपमा निको पार्न नसकिने एक दीर्घ रोग हो। जोर्नीको सुजन कम गरी यसलाई बिग्रनबाट जोगाउनु तथा बिरामीको कार्यक्षमता एवं उत्पादनशीलतामा ह्रास आउन नदिनु यसको उपचारको मुख्य उद्देश्य हो।
Rheumatoid आरथ्राइटिसको उपचारमा विभिन्न औषधिहरू, फिजियोथेरापी तथा अन्य कतिपय घरेलु प्रविधिहरूको समेत प्रयोग गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा जोर्नीको शल्यचिकित्साको पनि आवश्यकता पर्न सक्दछ।
Rheumatoid आरथ्राइटिसको उपचारमा मुख्यतः रोगलाई नियन्ण गर्ने र सुजन कम गर्ने औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ। एकाध जोर्नीमा मात्र रोगले च्यापेको खण्डमा त्यो जोर्नीमा सोझै स्टेरोइड औषधिको सुई दिएर पनि सुजन कम गर्न सकिन्छ। सुजन कम गर्ने तथा रोगलाई नियन्त्रणमा राखेर सम्भाव्य जटिलताबाट जोगाउने विभिन्न औषधिहरू विज्ञ चिकित्सकको सल्लाह र निगरानीमा रोगको कडापन र प्रकृति हेरी लामो समयसम्म र सम्भवतः जीवनभर पनि सेवन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उपचारको क्रममा आएको सुधार हेर्न तथा औषधिको हानीकारक असर एवं रोगका जटिलताहरू मूल्यांकन गर्नका लागि नियमितरूपमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा रगत जाँचको आवश्यकता पर्दछ।
Rheumatoid आरथ्राइटिसका बिरामीलाई यथेष्ट मात्रामा क्यालोरी, प्रोटिन र भिटामिनयुक्त स्वस्थकर तथा सन्तुलित भोजनको आवश्यकता पर्दछ। शरीरमा रोगको दीर्घ प्रभाव तथा औषधिको सम्भावित हानीकारक असरहरूबाट जोगिन पनि यस्तो खाना अत्यावश्यक हुन्छ। हाम्रो समाजमा विभिन्न खानेकुराहरूले यो रोग बढाउने विश्वास गरिन्छ, तर यसमा कुनै वैज्ञानिक आधार भेटिएको छैन। धुम्रपानले Rheumatoid आरथ्राइटिस बढाउन सक्ने, औषधिको प्रभावकारिता घटाउन सक्ने तथा विभिन्न हानीकारक असरसमेत निम्त्याउन सकने भएकाले यसबाट टाढै रहनु पर्दछ। त्यस्तै, जाँडरक्सीको सेवनले औषधिको हानीकारक असरलाई बढाउन सक्ने भएकाले यसबाट पनि जोगिनु जरुरी छ।
(लेखकः पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालको वरिष्ठ फिजिसियन, बाथरोग विशेषज्ञ तथा मधुमेह थाइरोइड एव इन्डोक्राइन रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ।)
रोगको औषधि के हो र कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो विभिन्न किसिमको बाथ (Rheumatoid आरथ्राइटिस, ढाडको बाथ, केटाकेटीको बाथ आदि) तथा आन्द्राको सुजन हुने रोगमा प्रयोग हुने औषधि हो।
धुम्रपान बन्दः धुम्रपानले बाथका रोगहरू उब्जाउने भएकाले रोगलाई बढाउने मात्र नभई औषधिको प्रभावकारितमा ह्रास ल्याउने र हानीकारक असरहरूसमेत बढाउन सक्ने भएकाले यसलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ।
मद्यपान बन्दः सल्फासालाजिन सेवन गर्ने व्यक्तिले मद्यपान गरेमा कलेजोमा थप हानीकारक असर पर्न सक्ने भएकाले मद्यपानबाट टाढै रहनु आवश्यक हुन्छ। नियमित रगत परीक्षणः सल्फासालाजिनले कलेजो तथा रगतमा असर पारेको छैन भनी यकिन हुन चिकित्सकको सल्लाहमा केही महिनाको अन्तरमा रगतको जाँच गर्न आवश्यक छ।
गर्भाधान तथा बच्चालाई स्तनपानः सल्फासालाजिनले गर्भमा रहेका बच्चालाई हानी गर्न सक्ने भएकाले गर्भ रहेको अवस्थामा वा गर्भवती हुने निर्णय लिएको अवस्थामा यो ओषधि सेवन गर्नुहुँदैन। सल्फासालाजिन सेवन गरिरहेको अवस्थामा सन्तान जन्माउने विचारमा हुनुहुन्छ भने पुरुष वा महिला जोसुकैले चिकित्सकको सल्लाहमा केही महिनाअघि नै औषधि रोक्नुपर्दछ। साथै सल्फासालाजिन प्रयोग गर्ने सुत्केरी महिलाले स्तनपान गराउनु हुँदैन।
सल्फासालाजिनले आन्द्राबाट फोलिक एसिड सोसिनमा व्यवधान पु-याउने भएकाले यो सेवन गर्ने बिरामीले प्रशस्त मात्रामा फोलिक एसिड भएका खानेकुराहरू (सागसब्जी, माछा, मासु, फलफूआदि) वा फोलिक एसिड ट्याबलेटको सेवन गर्नु पर्दछ।
प्रशस्त मात्रामा झोपदार्थ खानेः सल्फासालाजिनका अवयवहरू मृगौलामा थेग्रिएर असर नगरुन् भन्ने उद्देश्यले यो औषधि प्रयोग गर्ने बिरामीले प्रशस्त मात्रामा झोपदार्थ खानुपर्छ। साथै औषधि इनटेरिक कोटेड ट्याबलेटको रूपमा छ भने यसलाई सिंगै निल्नुपर्छ। भाँचेर, फुटाएर वा पिसेर सेवन गर्नुहुँदैन।
सामान्य असरहरूः वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुन सक्ने, खानामा अरूचि हुने, टाउको दुख्न सक्ने। औषधि खाएको केही दिनसम्म रहन सक्ने यी सामान्य असरहरू औषधि खाँदै जाँदा विस्तारै ठीक भएर जान्छन्। एलर्जीः कसै–कसैमा यसको प्रयोगले छाला चिलाउने, डाबर आउने, घाममा बस्दा छाला डढ्ने, छालामा विभिन्न किसिमका खटिरा आउने हुन सक्छ। यस्तो भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्य असरहरूः सल्फासालाजिनको प्रयोगले अत्यन्त बिरलैरूपमा रगत कम हुने तथा कलेजोमा असर पर्न सक्दछ। कहिलेकाहीं यो औषधिको प्रयोगले पुरुषमा विर्य पातलो हुन सक्छ। तर, सामान्यतया औषधि रोके २ देखि ३ महिनापछि यो आफैं ठीक भएर जान्छ।
अरू ओषधिसँगको अन्तर असरः सल्फासालाजिनको अरू केही औषधिसँग अन्तर असर हुन सक्ने भएकाले एन्टासिड, आरन, फोलिक एसिड तथा क्याल्सियम जस्ता औषधि सल्फासालाजिन खाएको ४ घण्टाभित्र नखानुहोस्। थप जानकारीका लागि अस्पताल, क्लिनिक वा औषधि पसलमा सम्पर्क राख्नुहोस्।
हरेक दिन खानेः लेफ्लुनोमाइड चिकित्सकको सिफारिसमा हरेक दिन वा एक दिन बिराएर नियमितरूपमा सेवन गर्नुपर्दछ। सामान्यतया यसको डोज १० देखि २० मिलिग्राम प्रतिदिन हुन्छ। यसलाई घरमा राख्दा चिसो तर सुख्खा ठाउँमा सुरक्षित राख्नुहोस्।
धैर्य गर्नुहोस्ः लेफ्लुनोमाइडले विस्तारै काम गर्दछ र रोगविरुद्ध यसको सकारात्मक असर देखिन सामान्यतया ६ देखि ८ हप्ता लाग्न सक्छ, त्यसैले हतार नगर्नुहोस्।
मद्यपान बन्दः लेफ्लुनोमाइड सेवन गर्ने व्यक्तिले मध्यपान गरेमा कलेजोमा थप हानीकारक असर पर्न सक्दछ।
धुम्रपान बन्दः धुम्रपानले बाथका रोगहरू उब्जाउन सघाउने, भएको रोगलाई बढाउने मात्र नभई औषधिको प्रभावकारितामा ह्रास ल्याउने र हानीकारक असरसमेत बढाउने भएकाले यसलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ।
नियमितरूपमा रगत परीक्षणः लेफ्लुनोमाइडले कलेजो तथा रगतमा असर पारेका छैन भनी यकिन हुन चिकित्सको सल्लाहमा केही महिनाको अन्तरमा रगतको जाँच गर्नु जरुरी छ।
बिरलै देखिनेः रक्त चाप बढ्न सक्ने। कलेजोमा असर पर्न सक्ने। रक्त कोषहरूको संख्या घट्न सक्ने। रोग कडा भएको खण्डमा मन्द ज्वरो आउने, शरीरमा रगतको कमी हुने, हातगोडामा गिर्खाहरू देखा पर्ने, आँखा रातो हुने र दुख्ने तथा मुटु र फोक्सोलगायत शरीरका अन्य अंगहरूमा सुजन भई ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ। यो रोगमा शरीरको रोगविरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिमा ह्रास आउने भएकाले निमोनिया, छाला तथा मूत्रमार्ग जस्ता अंगको इन्फेक्सन बढी र जटिलरूपमा देखिने सम्भावना हुन्छ।
आज मिति २०७७ फागुन २९ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहाेस्